निर्वाचन | Kantipur TV HD
प्रदेश एकका दुई वटा उपमहानगरपालिका मध्ये इटहरीमा २०४६ सालपछि पहिलोपल्ट नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हेमकर्ण पौडेल एमालेको विरासतका रुपमा रहेको इटहरीको प्रमुख बन्दै इतिहास रचेका हुन् ।
पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर नेपालगन्जको नेतृत्व यस पटक नेपाली कांग्रेसको हातमा पुगेको छ । २०१७ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालगन्जको बागडोर ११ जनाले सम्हालेका छन् ।
प्रदेश १ को एक मात्र महानगर विराटनगरमा स्थानीय तहको चुनावी मत परिणाम रोचक आएको छ । महानगरको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले जित हात पारेको छ । सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एक्लै निर्वाचनमा होमिएको एमालेले उपप्रमुखसहित ९ वडामा विजयी हासिल गर्‍यो । वडा तहमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी केही खुम्चिएका छन् भने माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने एउटा वडाअध्यक्ष जितेर महानगरमा प्रवेश गरेको छ ।
राजनीतिक रुपमा प्युठान र बाग्लुङलाई नेकपा मसालको आधारभूमिका रुपमा लिने गरिन्छ । नेकपा मसालका महामन्त्री "मोहनविक्रम सिंहको" गृहजिल्ला प्यूठान र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको गृह जिल्ला बाग्लुङलाई कुनै समय मसालको गढका रुपमा चिनिन्थे । तर पछिल्लो समय यी दुवै जिल्लामा नेकपा मसाल र त्यसको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा शाख जोगाउन संघर्षरत छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरु दलित र पछाडि पारिएका वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै चर्को भाषण गर्न पछि पर्दैनन् । तर दलित समुदायलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन भने खासै चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अपवाद बाहेक दलित समुदायका प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् ।
हेटौंडा उपमहानगरमा एमालेले आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राख्न सकेन
२०४९ सालदेखि हेटौडा उपमहानगरको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमालेले यो पटक जित्न सकेन । पाँचदलीय गठबन्धनले यो पटक एमालेलाई हराएर नयाँ इतिहास रच्दा नगरले पहिलो महिला प्रमुख पाएको छ ।
मतपत्रमा मत बदर संख्या किन बढ्यो त ?
भेरी प्राविविधिक शिक्षालयको बहुउद्धेश्सीय हलमा जारी मतणनाको जति जति नतिजा सार्बजनिक भैरहेको छ उतिनै प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि दिएका मतहरु बदर हुनेक्रम बढेको छ । मतदाता शिक्षा नहुनु, मतपत्रमा उम्मेदवारका चुनाव चिन्ह धेरै हुनु र उम्मेद्वार नभएका पदमा पनि चिन्ह हुनुले मत बदर संख्या बढेको निर्वाचन अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
आचार संहिताविपरितका ३३ वटा घटनामा आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विगतकै संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । चुनाव प्रसारका क्रममा अधिकांश दलले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गर्नेदेखि मतदातालाई सामान र पैसा बाँड्नेसम्मका गतिविधि गरेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ३३ वटा घटनामा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोधेको छ । कसैलाई कारवाही भने गरेको छैन ।
बाचा पुरा नगर्ने उम्मेदवार फेरि भोट माग्न आएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाता रुष्ट
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिदै गर्दा घोषणा पत्र बोकेर गाउँ छिरेका दलको चुनावी मुद्धाप्रति मतदाता सन्तुष्ट छैनन् । विगतमा गरेका बाचा पुरा नगरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाता रुष्ट बनेका हुन् ।
नियमित काम र उचित ज्यालाको व्यवस्था मिलाउनेलाई भोट
संगठित क्षेत्रका मजदुरलाई कामको समस्या नभएपनि असंगठित क्षेत्रका मजदुरका पीडा बेग्लै छ । उनीहरुले हरेक दिन काम पाउँदैनन् । पाएको कामको पनि उचित ज्याला मिल्दैन । चुनावका लागि मत माग्दै आएकाहरुलाई उनीहरुले रोजगारी सृजना र महङ्गी नियन्त्रण गरे मात्र मतदान गर्ने बताएका छन् ।
उम्मेदवारले मतदातासमक्ष कस्ता अपील गरिरहेका छन् त ?
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा धेरैको ध्यान काठमाडौं महानगरमा छ । देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये सवैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा दल तथा उम्मेदवारले गरेको चुनावी प्रचारले अन्य स्थानीय तहमा समेत प्रभाव पर्छ । अहिले काठमाडौंमा चुनावी प्रचार र घरदैलो अभियान तीव्र छ । आफ्नो घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र बोकेर घरदैलोमा पुगिरहेका उम्मेदवारले मतदातासमक्ष कस्ता अपील गरिरहेका छन् त ?